Fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka
Boky momba ny fandrosoana mailaka farany amin'ny Marketing Marketing
Talata, Martsa 15, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
MarketingSherpa, miaraka amin'ny Marketing Marketing ClickMail, dia nanangona boky iray heck iray amin'ny boky fampianarana amin'ny Email Marketing Advanced Practices!
Ireo mpivarotra mailaka anio dia miatrika fanamby lehibe amin'ny fifandraisana amin'ny mpihaino azy. Eo anelanelan'ny fanavahana ny marikao amin'ny fifaninanana, fanolorana fitarihana mahay sy fampitomboana ny fidiram-bola an-tserasera, mety ho sarotra ny mamaritra hoe aiza no tokony handanianao ny fotoanao sy ny loharano ilaina, indrindra ny mamorona paikady marketing mailaka mahomby izay hitondra anjara biriky amin'ny fahombiazan'ny ny fikambanana misy anao.
Mitovy amin'ny Martech Zone mpanjifa, manafatra amin'ny 25 martsa ary mahazo a Fihenam-bidy $ 100 miaraka amina manokana mialoha ny fandefasana! Vakio bebe kokoa momba ny boky torolàlana izay manome fizotran'ny voaporofo mandritra ny 7 taona amin'ny fampisehoana marketing amin'ny mailaka!
Raha nanaraka ny bilaogiko nandritra ny fotoana kelikely ianao dia fantatrao izany Semrush no fitaovana fanalahidy ankafiziko indrindra - mahery tokoa izy io hamantarana ireo teny lakile, hanao fikarohana mifaninana ary hamantatra ireo pejy izay naorinao fa tsy tsapanao. Zahao a santionany tatitra - zavatra mahafinaritra! Ireo olona 5 voalohany mamaly ity mailaka ity dia hahazo kaonty maimaimpoana!
Famerenana amin'ny laoniny tranokala WordPress mampidi-doza
Hevitra momba ny marketing: fisoratana anarana amin'ny fisehoana iray-tsindry iray